Cismaan Abokor ee Xisbiga ILAYSKA
SOMALITALK - AMNESTY
"Waxa meel lagaga dhacay dhaqankii, xishoodkii, xurmadii iyo gobanimadii ay gaarka u lahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed ".
ISHA QORAALKA: Mudugonline.com
Cismaan Abokor oo ka hadlay Arinta Samsam Axmed Ducaale oo ku xiran Hargeysa
Waxaan fursad u helay inaan waraysi kala yeelano arinta xasaasiga ah ee la soo gudboonaatay Samsam Axmed Ducaale oo ku xiran xabsi ku yaal magaalada Hargaysa Cismaan Abokor oo ah siyaasi dhallin yaro ah oo fir-fircoon, kuna takhasusay Cilmiga siyaasadda iyo dhaqaalaha, siyaasadda Somaliland-na aqoon durugsan u leh, isagoo ahaa Guddoomiyihii Xisbigii ugu horreeyey Xisbiyada Somaliland ee ILAYSKA. Cismaan waxa uu hadda ku sugan yahay magaalada London ee cariga Ingiriiska.
Waraysiga oo uu qaaday tafaf tiraha Mudugonline.com waxaa su'aalihii aannu weydiinayna Cisman Abokor u dheceen sidaan;
Su'aal: Marka hore bal siday u ogaadaan akhristayaasha aan la socon arinta ku saabsan Samsam Axmed Ducaale waxaad naga siisaa horudhac siday arintaan ku bilaabatay iyo halka ay marayso.
Wallaahay Maxamedow, horta arrinta Sam-sam illaa bishii siddeedaadba waynu maqlaynay, laakiin waxad mooddaa in bishii sagaalaad ee September ay xadhkaha goosatay oo meel kasta oo Soomaali joogto laga wada maqlay. Sida aan ku helay warka rasmiga ahna Sam-sam Axmed waxa ay ahayd ardayad aad u da' yar oo ka timi magaalada Boosaaso, soona booqatay abtigeed oo deggan Hargeysa kana tirsan xukuumadda Somaliland, nasiib darro inantii yarayd oo aan aqoon fiican u lahayn Magaalada Hargeysa waxay ku dhex luntay magaaladaa mugga weyn leh ee Hargeysa oo hore loogu maah-maahay "Nimaan hoy ku lahayn habeenna u dumay Hargeysi maxay ku haysaa". Taas oo kelliftay in looga shakiyo basaasnimo laguna xidho saldhigga dhexe ee Magaalada Hargeysa iyada oo lagu eedaynayo shirqool ay u maleegaysay Madaxweyne ku xigeenka. Markaa arrintaas illaa bilowgii bishii sagaalaadba waan la' socday, weliba annaga oo dhowr nin oo London jooga ah ayaa si weyn isugu daynay in warkeeda rasmiga ah aannu ogaanno maaddaama ay tahay arrin ku cusub dhaqanka siyaasadda Soomaalida, yacnii inan Soomaaliyeed oo loo haysto basaasnimo. .
Su'aal: Waxaa jira warar sheegaya in Samsam Axmed Ducaale markii la keenay maxkamada Hargaysa ay sheegtay in intii ay xabsiga ku jirtay si xun loola dhaqmay oo jirdil iyo waliba faraxumayn ay ku sameeyeen askar ka tirsan qaybta dambi barista CID-da, arintaas ma maqashay maxaase ka jira?
Arrintaas walaal waan maqlay, niman odayaal ah oo aannu u dirnay in ay soo hubiyaanna waadigii ogaa oo waa la xidh-xidhay maalintii maxkamadda oo ay ku jiraan laba mudane oo ka tirsan Golaha Guurtida, taas oo aannu u fahannay in Samsam la doonayo in maxkamaddeeda aan la ogaan, mana beensanayo in ciidamada CID-du samayn karaan kufsi iyo wax ka xun labadaba, maxaa yeelay maaha sida Booliska iyo milateriga dad lagu soo xulay dhaqan iyo asluub, waa dad lagu soo xulay damiir darro, dhowaanna waxay ku kufsadeen Idaacadda Radio Hargeisa dhexdeeda gabadh dhega la'.
Su'aal: Taliyaha Booliska S/L Wuxuu laanta afka Somaliga BBC dhawaan u sheegay in gabadhu ahayd basaasad Dawlad goboleedka Puntland u soo dirtay inay soo ogaato meesha uu ku nool yahay Madaxweyne ku xigeenka Somaliland si loo shirqoolo, isagoo intaas ku daray inay iyadu afkeeda ka qiratay markii xabsiga su'aalo arintaas la xiriira lagu weydiiyay in shirqool u maleegaysay madaxweyne ku xigeenka Somaliland. Miyaan taas loo qaadin
Karin in gabadha la jir dilay haddiiba ay qiratay dambiyadaas culus oo aan u ekayn waxaan suura gal ahayn?
Horta Maxamedow aqoon fiican baan u leeyahay taliyaha Booliiska Somaliland, G/Sare Maxamed Cige, waa nin aan sharciga u aabba yeelin ama aan tixgelin, waxa aan xusuustaa waagii uu Wasiirka Hawlaha Guud ka ahaa dowladdii Sal-ballaar ee Gen Caydiid oo uu oran jirey Somaliland dowlad iyo nabad gelyo toona kama jirto, waxa kale oo aan xusuustaa habeenkii uu xabsiga u taxaabayey Boqor Cismaan Buur-Madow ee uu ku lahaa anagaa sharciga ka sarrayna ee soo bax. Markaa taliyahaas Booliska anigu hadalkiisa ma tix-gelinayo, laakiin waxa ayaan darro ah in taariikhda Soomaalida markii ugu horreysay gabar Soomaaliyeed lagu eedeeyo basaasnimo, waxay ila tahay in arrintaasi tahay dembi weyn oo laga galay gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta iyo maamuuska badan. Wixii dalka ka dhacay collaad iyo hirdan siyaasadeed gabdhaha Soomaaliyeed waxa ay ka ahaayeen Xalay Dhalay, mana geyaan gefkan loo geystay Samsam Axmed. Sidaas darteed waxan leeyahay waxa caddaan ah in meel lagaga dhacay dhaqankii, xishoodkii, xurmadii iyo gobanimadii ay gaarka u lahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed markii lagu eedeeyey basaasnimo, taariikhda gabdhaha Soomaaliyeedna waxa u furmay baal madow.
Ta kale ee ayaan darrada ah waxa weeye in gabadhaas yar sharafteeda wax lagu yeelo waxay rabtay in ay soo aragto guriga Madaxweyne ku xigeenka, malahay waxa uga fiicnaa in ay dembi toos ah u sameeyaan oo inta ay bastoolad u dhiibaan ay yidhaahdaan madaxtooyada ayaannu ku qabanay oo Riyaale ayay dilaysay. Laakiin wadaadka yar ee miskiinka ah ee madaxweyne ku xigeenka ah ee gurigiisu ku yaallo wadada Jig-Jiga-Yar aadda ee qofkastaaba yaqaanno ayay gurigiisa soo arkaysay waxay ila tahay in aanay dembi ahayn.
Su'aal: Dadka reer Somaliland iyo qaasatan kuwa ka soo jeeda Beelaha bariga Somaliland sida Burco oo kale sidee u arkaan arintaan mise ka warqabaan xaalada Samsam?
Arrintani mujtamaca Soomaaliyeed oo dhan dhexdiisa waa ka caan, dadka damiirka leh badankooduna way ka xun yihiin arrintan, waanay la' yaabban yihiin waxaanay kiiska ku sii buuxinaysaa masuuliyiinta xukuumadda oo ku tagri falay awooddii yarayd ee ay hayeen.
Su'aal: Dad badan ayaa Aaminsan arinta gabadhaan in xakuumada Riyaale uga danleedahay sidii ay u abuuri lahayd xaalad adag oo kala qoqob ah oo shacabka labada gobol aysan isku gudbin karin, arintaas side u aragtaa? Dhib noocee ah ayaase ka dhalan kara?
Labadan qaybood ee Puntland iyo Somaliland waxa ka dhexeeyey shacabkooda walaaltinimo, deris wanaag, is jacayl, is dhex-gal iyo iskaashi, markaas dabcan waa la oran karaa,waa la kala fogaynayaa, maxaa yeelay maaha markii ugu horreysay ee Riyaale iyo hawl-wadeenadiisu ay ku tallaabsadaan arrintan oo kale, hore waxa ay u xayireen isu socodkii iyo ganacsigii labada shacab, kaddib markii ay ciidamo kala dhex dhigeen, xaalad abuurka iyo nacayb beerku waa badnaa, hadda wad u jeeddaa waxa hargeysa ka socda. Laakiin ma aamminsani in riyadoodaasi u rumoobi doonto, maxaa yeelay awooddooda oo iskaba liidata siina dhimanaysa waqtigan iyo rabitaanka shacabka oo ka weyn rabitaanka qof iyo koox labadaba.
Su'aal: Ma jiraan wax dhaq-dhaqaaq ah oo ay sameeyeen shacabka Somaliland iyo hay'adaha xaquuq insaanka u dooda sidii loo sii dayn lahaa Samsam?
Haa walaal way sameeyeen, odayaasha la xir xirayba kamid bay ahaaayeen, hay'adaha xuquuqul insaanka aad bay uga hadleen, saxaafaddu usbiicii ugu dambeeyey aad bay uga hadashay, waana laga hadli doonaa, sababta oo ah waxani waa dhaqan iyo dheg bi'in.
Su'aal: Ma jiraan Siyaasiyiin reer Somaliland ah oo arintaan ka hadlay adiga ka hor?
Walaal hadda waxan ogahay in xildhibaanada Axmed Dirir iyo Gubadle loo xiray arrinta Samsam, inkasta oo markii dambe la sii daayey, laakiin Illaa hadda ma ogi siyaasiyiin muhiim ah oo ka hadlay arrinta, waanan la' yaabbanahay sababta ay taasi u dhacday.
Su'aal: Cusmaan ahaan adiga maxaad u soo jeedin lahayd dawlada Somaliland ee arinta gabadhaas?
Wallaahay wax aan u soo jeedinayaa ma jirto sababta oo ah qof aad taqaan yaad tahay lama yidhaahdo, caqligooda ayaan aqaan, taariikhdooda ayaan aqaan, taladooda ayaan aqaan, laakiin shacabka Somaliland iyo Samsam Axmed Ducaale ayaan midba eray oran lahaa haddii aad ii oggolaato.
Su'aal: Waad oran kartaa Cismaan?
Shacabka Somaliland waxan leeyahay, waad ogtihiin in habluhu meel kasta joogaan caawana Boosaaso ama Gaal-kacyo laga soo helayo boqolaal hablood oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Somaliland, markaa waxan leeyahay haddii damiirkiinii dhintay oo aydaan xumaanta ka dhiidhiyayn gabdhihiina kayd xun ha u dhigina ee diida dheg-xumada dhulkiina laga wadao. Samsamna waxa aan leeyahay iska samir Adeer waa lagugu gefay, hablaha Soomaaliyeedna ma geyaan basaasnimo iyo been abuur midna, ogowna dhibta laguu geystay in cidda kuu geysatay ay isku qoomamayn doonto mustaqbalka.
Waraysiga waxaa qaaday Mudugonline.com